Kugovanisa Vatengi ndiyo Kiyi Yako Kukura Kwebhizinesi Muna 2016 | Martech Zone
Mugovera, January 23, 2016 Svondo, Ndira 24, 2016 Dane Atkinson
Muna 2016, zvikamu zvine hungwaru zvinotamba chinzvimbo chinotungamira muzvirongwa zvemushambadzi. Ivo vanofanirwa kuziva pakati pevateereri vavo vevatengi uye tarisiro ndiani anonyanya kuita uye ane simba. Vakashongedzerwa neruzivo urwu, vanogona kuendesa yakanangwa uye inoenderana mameseji kuboka rino rinozosimudzira kutengesa, kuchengetedza, uye nekuvimbika kwese.
Imwe tekinoroji chishandiso icho chave kuwanikwa kune chinonzwisisika chidimbu chikamu cheVateereri Segmentation chinongedzo kubva SumAll, mupi wedata rakabatana analytics. Iri sevhisi rinoshandisa dhata rakaunganidzwa kubva kumakambani anodarika mazana mashanu ezviuru uye vatengi vanopfuura bhiriyoni rimwe. Iri dhatabhesi hombe rine dhata rehuwandu pamwe nehunhu hwemagariro enhau. Iyo kambani inogona kurodha yavo email yekudyidzana dhatabhesi kune Vateereri Segmentation uye vanogamuchira jenda, nzvimbo, zera, uye zvemagariro enhau data
Vakashongedzerwa neruzivo urwu, vashambadzi vanogona kugadzira mishandirapamwe yakanangwa kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana, senge masocial network, kushambadzira mapuratifomu, email, uye tsika yekubatsira tafura yekusimudzira. Segmentation inobvumira kuumbwa kwemukati iyo inonyanya kukosha kune hupenyu chaihwo hwevatengi. E-mail iyo inokurudzira uyo anotambira kuti "atitevere pa Instagram" inonzwisisika zvakanyanya kana zvasimbiswa kuti ivo, zvirinani, vane Instagram account. Chiito cheku "tevera" chinobva choda kubaya kana maviri, pachinzvimbo chese sign sign maitiro.
Heino pfupiso yeiyo SumVose Vateereri Chikamu maitiro uye kuti vashambadzi vanogona sei kuwedzera izvo zvinonzwisisika zvinotevera:
Iyo kambani inoisa yayo email runyorwa
Iyo SumAll injini inowana anonyorera Facebook, Twitter, uye Instagram maakaunzi
Iko kubatanidzwa uye masimba ezvekuita enetiweki yega yega anoongororwa. Kubatikana ndiko kuti mushandisi anopindirana kangani pane iyo saiti saiti, uye kukurudzira ndiyo nhamba yevateveri.
Huwandu hwevanhu hunodhonzwa nekuyambuka-kutarisa iyo email kero ine hombe dhatabhesi
Chishandiso zvakare chinoratidzira epamberi chikamu chevashandisi veTwitter iyo inobvumidza vashambadzi kuisa runyorwa rweTwitter inobata vobva vadhonza email uye ruzivo rwevanhu. Vatengesi vanogona kushandisa zviwanikwa kuti vavake Twitter zvichitevera vaine chivimbo chekuti vanogona kupedzisira vateedzera avo vateveri kuburikidza nemazhinji-chiteshi kutaurirana.
Ndiwo uyu mugero-chiteshi mukana unova iwo musimboti kubatsirwa kwezvikamu zvakadaro. Vatengi vanotarisira chiitiko chisingachinjiki uye chinobata, kunyangwe vari kutaurirana neiyo brand kuburikidza ne Instagram kana kuburikidza neye chat rubatsiro tafura. Chishandiso chakadai seVateereri Segmentation ine simba nekuti inogona kutungamira vashambadziri padanho rekubata mushandisi anogona kunge aine yekudyidzana chiteshi. Funga nezve vanhu vaviri, vese vane maakaundi e Instagram, asi mumwe ane vateveri vanomwe, uye mumwe ane vateveri zviuru makumi mana nezvina. Kana vaviri ava vakabatanidzwa pamwechete mumushandirapamwe we "Instagram", pachave nemimwe mhedzisiro, asi haina kugadzirirwa. Vatengi kana tarisiro ine yakakura yekutevera waranti yakagadziriswa macampaign uye ekushambadzira zvinopihwa sezvo kukosha kwavo pane iyo chiteshi kunogona kuve kwakakura.
Zvemagariro zvikamu zvemagariro zvinogona zvakare kushandiswa kuzivisa iyo tafura yekubatsira, CRM, uye mamwe maratidziro ezvemagetsi mapuratifomu nezve vangangove akakosha vatengi. Semuenzaniso, iyo yekubatsira tafura yekutaura uye foni sisitimu inogona kumaka vashandisi vane vanopfuura 100,000 vateveri veTwitter, nemirairo kune mumiririri kuti avape iyo yakasarudzika ye-Twitter-based dhizaini kana kusimudzira. Maitiro aya anotariswa zvakanyanya, uye zvakare anozadzisa kudiwa kwevatengi vazhinji kuti vaonekwe sevanhu, kunyanya kana vashambadziri vachipa zvakadaro nenzira dzisina musono uye dzisingaonekwe.
Chikamu chakadai chinosanganisira zera uye ruzivo rwevanhu zvinogadzirawo mitambo yakasimba yeAdWords, sevashambadziri vanogona kuenzanisa kwavo kushambadza kwakaratidzwa kune mamwe maseti evatengi. Izvi zvinovawanisa nzira yekubhidha pamazwi akakosha, asi kune vateereri chete kuti mari isakwire kunze kwekutonga.
Segmentation iri kuchinja kupfuura nyore huwandu hwevanhu (vane makore makumi maviri nemakumi matatu nemana vechidiki muMassachusetts), kupinda munzvimbo nyowani inosanganisira yemagariro maitiro uye zvimwe zviito zvinopa vashambadziri maonero akasarudzika uye akakodzera evatengi vavo.
Tanga paSumAll mahara!
Tags: CRMFacebookHelpdeskzvikamuzvemagariro analyticsmuteroTwitter
Dane Atkinson akatanga kambani yake yekutanga, SenseNet Inc., aine makore gumi nemasere. Kambani iyi yakakura nekukurumidza kuburikidza nekushandira makambani eFortune 18 (WPP, Pfizer, Lucent) kumazana evashandi pamakondinendi matatu. Kubva ipapo, ave nebasa rakabudirira zvakanyanya seyemuchina wehunyanzvi uye akatanga, akatenga, uye akatengesa anopfuura gumi nemaviri emakambani. Unyanzvi hwake hwakawanda hwehunyanzvi uye hwekushambadzira hunotibatsira kuendesa basa rinowedzera kupfuma kune vatengi vedu. Pamusoro pechinzvimbo chake saCMA, Dane anoitawo seye chipangamazano uye nhengo yebhodhi kumakambani mazhinji anotungamira ehunyanzvi.
Iwo matatu Ekuyera eakaenzana Email Kushambadzira Strategic
Ndira 24, 2016 na2: 19 PM
Dane, pane B2B yakaenzana nebasa iri?